Mitadiava fitsaharana ao amin'i Jesosy - Church of God World Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-02 > Mitadiava fihavanana amin'i Jesosy
Hoy ny didy folo: “Tsarovy ny andro sabata izay hanamasinanao azy. Henemana no hiasanao sy hanaovanao ny asanao rehetra. Fa Sabatan'i Jehovah Andriamanitrao ny andro fahafito. Ao no tsy hanaovanao asa na dia ny zanakao-lahy, na ny zanakao-vavy, na ny andevovavinao, na ny biby fiompinao aza, na ny vahiny aza ao amin'ny tanànanao. Fa enina andro no nanaovan'ny Tompo ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao aminy ary nitsahatra tamin'ny andro fahafito. Izany no antony nitahian'ny Tompo ny andro sabata sy nanamasinany azy » (Genesisy 2-20,8). Ilaina ve ny mitandrina ny Sabata mba hahazoana famonjena? Na: «Ilaina ve ny mitazona alahady? Ny valinteniko dia: «Tsy miankina amin'ny andro iray ny famonjena anao, fa amin'ny olona iray, dia amin'i Jesosy»!
Vao haingana aho no niantso namana tany Etazonia tamin'ny telefaona. Niditra tao amin'ny Fiangonan'Andriamanitra naverina tamin'ny laoniny izy. Mampianatra ny famerenana amin'ny laoniny ny fampianaran'i Herbert W. Armstrong ity fiangonana ity. Hoy izy nanontany ahy: "Mitandrina ny sabata ve ianao"? Namaly azy aho hoe: "Tsy mila famonjena intsony ny Sabata amin'ny fanekena vaovao"!
Vahoaka roapolo taona lasa izay no henoko izany fanambarana izany ary tamin'izany fotoana izany dia tsy tena azony ny dikan'ilay fehezanteny satria izaho dia mbola eo ambanin'ny lalàna. Mba hanampiana anao hahatakatra hoe inona ny fahatsapana ho niaina teo ambanin'ny lalàna, dia hitantara aminao amin'ny tantaran'ny tena manokana aho.
Fony mbola zaza aho dia nanontany ny reniko: "Inona no ilainao amin'ny Andron'ny Neny?" "Faly aho raha zanaka mahafinaritra ianao," hoy aho nahazo valiny! Iza sa inona ny zaza mahafinaritra? "Raha manao izay lazaiko aminao ianao." Fehiko dia izao: «Raha manohitra ny reniko aho dia zaza ratsy.
Tao amin'ny WKG dia nahafantatra ny fitsipik'Andriamanitra aho. Zanako malala aho rehefa manao izay lazain'Andriamanitra. Hoy izy: "Tokony hotandremanao ho masina ny andro sabata, dia ho voatahy ianao"! Tsy olana, nieritreritra aho, azoko ny fitsipika! Tamin 'ny fahatanorako dia nijanona aho. Ny fitandremana ny Sabata dia nanome ahy fiarovana sy filaminana. Tamin'izany fomba izany dia toa zazalahy mahafinaritra ahy aho. Androany dia manontany tena amin'ny tenako aho hoe: «Mila fiarovana ve izany? Ny hamonjy ahy ve no ilaina? Miankina tanteraka amin'i Jesosy ny famonjena ahy! »
Inona no ilaina amin'ny famonjena?
Rehefa avy nahary an'izao tontolo izao manontolo tao anatin'ny enina andro Andriamanitra dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito. Ady nandritra ny fotoana fohy tao Adama sy i Eva. Ny fahalavoan'izy ireo amin'ny ota dia nahatonga azy ireo ho eo ambanin'ny ozona, satria i Adama dia tokony hihinana ny sakafony amin'ny hatsembohan'ny tavany amin'ny ho avy ary hiteraka zaza i Eva mandra-pahafatiny.
Taty aoriana dia nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra. Nangataka asa ity fifanekena ity. Tokony hanaraka ny lalàna izy ireo ho marina, voatahy ary tsy voaozona. Ao amin'ny fanekena taloha, ny vahoaka israelita dia tokony hanao asa ara-pivavahana momba ny fahamarinana. Mandritra ny enina andro, isan-kerinandro. Navela hitsahatra iray andro amin'ny herinandro fotsiny izy ireo, ny andro Sabata. Taratry ny fahasoavana io andro io. Fanambarana mialoha ny fanekena vaovao.
Raha tonga tety an-tany Jesosy dia niaina teo ambanin'ity fanekena ity, araka ny voasoratra hoe: «Fa rehefa tonga ny fotoana dia nirahin'Andriamanitra ny zanany lahy, nateraky ny vehivavy ary teo ambanin'ny lalàna» (Galatiana 4,4).
Maneho ny lalàn'Andriamanitra ny enina andro nanaovana ny famoronana. Izy io dia tonga lafatra sy tsara tarehy. Manaporofo izany amin'ny tsy fahatanterahany sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Tena zava-dehibe fa Andriamanitra irery no afaka manatanteraka izany amin'ny alalan'i Jesosy.
Jesosy dia nanatanteraka ny lalàna ho anao amin'ny fanaovana izay rehetra ilaina. Nataony teo amin'ny toeranao ny lalàna rehetra. Nihantona teo amin'ny hazo fijaliana izy ary nofaizina noho ny fahotanao. Raha vao nandoa ny vidiny dia hoy i Jesosy: "Vita"! Avy eo dia niondrika izy mba hiala sasatra ka maty.
Apetraho amin'i Jesoa daholo ny fitokisanao ary hijanona mandrakizay ianao satria nohamarinina eo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy mila miady ho famonjena anao ianao satria efa voaloa ny vidin'ny trosanao. Tanteraka! "Fa izay hiditra amin'ny fitsaharany, izy dia miala amin'ny asany toa an'Andriamanitra ihany. Koa andao isika hiezaka hiditra ao anatin'ity tony ity mba tsy hisy na dia iray aza latsaka, toy ny amin'ny tsy fankatoavana (Tsy mampino) » (Hebreo 4,10: 11 Fandikana ny Genève vaovao).
Rehefa miditra amin'ny fitsaharan'ny fahamarinan'Andriamanitra ianao dia tokony hanao ny asanao marina. Ankehitriny dia asa iray ihany no andrasana aminao: "Mandehana soa aman-tsara"! Averiko ihany, hainao ihany izany amin'ny mino an'i Jesosy. Ahoana no mety hianjera anao ary lasa tsy mankatò? Amin'ny fanirianao ny hampiasa ny fitsarana anao. Izay ny tsy finoana.
Raha toa ianao ka mijaly amin'ny fahatsapana ho tsy ampy tsara na tsy mendrika dia mariky izany fa tsy mbola ao amin'ny fiadanan'i Jesosy ianao. Tsy momba ny fangatahana famelan-keloka hatrany sy ny fanaovana karazana fampanantenana rehetra amin'Andriamanitra izany. Momba ny finoanao mafy an'i Jesosy no hampitsaharana anao! Nomena tsiny ianao tamin'ny fanatitr'i Jesosy rehetra satria niaiky izany taminy ianao. Izany no antony anaovasanareo madio eo anatrehan'Andriamanitra, fitenenana tsara sy masina ary marina. Mila misaotra an'i Jesosy amin'izany ianao.
Ny fanekena vaovao dia fitsaharana amin'ny Sabata!
Nino ny Galatianina fa ny fahasoavana dia nanome azy ireo fidirana amin'Andriamanitra. Nihevitra izy ireo fa zava-dehibe ny mankatò an'Andriamanitra sy hitandrina ny didy araka ny Soratra Masina. Ny didy mazava momba ny famorana, andro fanasana sy andro sabata, didin'ny fanekena taloha.
Ny Galatianina dia nitana ny fampianaran-diso fa ny Kristiana dia tokony hitandrina ny taloha sy ny fanekena vaovao. Hoy izy ireo: "Ny fahamendrehana amin'ny alàlan'ny fankatoavana sy ny fahasoavana" dia ilaina. Diso izy ireo nino izany.
Vakiantsika fa i Jesosy dia niaina teo ambanin'ny lalàna. Rehefa maty Jesosy dia nijanona tsy miaina eo ambanin'ity lalàna ity izy. Ny fahafatesan'i Kristy dia namarana ny fanekena taloha, ny fanekena. "Fa Kristy no faran'ny lalàna" (Romana 10,4). Andao hamaky izay nolazain'i Paoly tamin'ny Galatianina: «Raha ny marina anefa, tsy misy idirako amin'ny lalàna intsony; Maty noho ny fanamelohana ny lalàna ny lalàna aho hiaina ho an Andriamanitra hatramin'izao; Voahombo miaraka amin'i Kristy miaraka amin'i Kristy aho. Velona aho, nefa tsy izaho izao, fa Kristy no mitoetra ato amiko. Satria izay miaina ankehitriny amin'ny nofo, miaina amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra aho, izay efa tia ahy ary nanolotra ny tenany hamonjy ahy » (Galatiana 2,19: 20 fandikana vaovao nataon'i Geneva).
Ny fitsarana ny lalàna dia niara-maty tamin'i Jesosy ianao ary tsy miaina intsony ao amin'ny fanekena taloha. Niara-nohomboana tamin'i Jesosy izy ireo ary nitsangana tamin'ny fiainana vaovao. Izao dia miala sasatra amin'i Jesosy ianao amin'ny fanekena vaovao. Miara-miasa aminao Andriamanitra ary manisa anao izy satria manao ny zava-drehetra amin'ny alalanao. Ity fomba ity no ipetrahanao amin'ny fitsaharan'i Jesosy. Ny asa dia nataon'i Jesosy! Ny asanao amin'ny fanekena vaovao dia ny hino izao: "asan'Andriamanitra izay hinoanao an'ilay nirahiny" (Jaona 6,29).
Ny fiainana vaovao ao amin'i Jesôsy
Inona no tony ao amin'ny fanekena vaovao ao amin'i Jesosy? Tsy mila manao na inona na inona intsony ve ianao? Afaka manao araka izay tianao ve ianao? Eny, afaka manao araka izay sitraponao ianao! Afaka misafidy ny alahady sy miala sasatra ianao. Azonao atao ny mitandrina ny andro Sabata ho masina na tsia. Tsy misy fiantraikany amin'ny fitiavany anao ny fihetsikao. Jesosy tia anao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny heriny rehetra.
Neken'Andriamanitra tamin'ny loto rehetra aho tamin'ny fahotako. Ahoana no tokony handraisako izany? Tokony hiondrika amin'ny fotaka toy ny kisoa ve aho? Nanontany i Paoly hoe: "Ahoana izao? Hanota ve isika satria ambanin'ny fahasoavana fa tsy ambanin'ny lalàna? Lavitra izany » (Romanina 6,15)! Mazava ny valiny hoe tsia! Amin'ny fiainam-baovao dia iray ao amin'i Kristy no miaina ao amin'ny lalàn'ny fitiavana, tahaka ny mahavelona an'Andriamanitra ny lalàn'ny fitiavana.
"Aoka isika ho tia satria izy no tia antsika voalohany. Rehefa misy miteny: tiako Andriamanitra ary halako ny rahalahiny izay mpandainga. Fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany dia tsy afaka tia an'Andriamanitra izay tsy hitany. Ary izao no didy efa azontsika taminy: Izay rehetra tia an'Andriamanitra dia tia ny rahalahiny » (1 Jaona 4,19: 21).
Efa niaina ny fahasoavan'Andriamanitra ianao. Nahazo famelan-keloka tamin'Andriamanitra ianao ary nihavana indray tamin'ny alalàn'ny sorom-panavotan'i Jesosy. Zanaka naterak'Andriamanitra sy mpandova ny fanjakany ianao. Jesosy nandoa vola tamin'ny rany ary tsy afaka manao na inona na inona ianao satria atao izay rehetra ilaina amin'ny famonjena anao. Tontosa ny lalàn'ny fitiavana ao amin'i Kristy amin'ny alàlan'i Jesosy hiasa tsara amin'ny alalanao. Aoka ny fitiavan'i Kristy hikoriana amin'ny namanao tahaka ny nitiavan'i Jesosy anao.
Raha misy olona manontany ahy anio: "Mitandrina ny sabata ve ianao", dia mamaly aho: "Jesosy no Sabatako"! Izy no tiko. Manana ny famonjeko ao amin'i Jesosy aho. Ianao koa dia afaka mahita ny famonjenao ao amin'i Jesosy!